Akhriso Tobankii Ciyaartoy Ee Magaca Wayn Leh Ee Soo Bandhigay Xidigihii Ugu Adkaa Ee Ay Ka Hor Yimaadeen- Min Messi, Ronaldo Iyo Magacyada Kale Ee Liiskan Ku Jira. - Gool24.Net
Akhriso Tobankii Ciyaartoy Ee Magaca Wayn Leh Ee Soo Bandhigay Xidigihii Ugu Adkaa Ee Ay Ka Hor Yimaadeen- Min Messi, Ronaldo Iyo Magacyada Kale Ee Liiskan Ku Jira.
March 18, 2020 Mahamoud Batalaale
Ciyaartoyda kubbada cagta ayaa marar badan soo bandhigay xidigaha ugu adkaa ee ay garoomada kaga hor yimaadaan, waxaana muuqata in xidigo iyaga laga cabsadaa ay markooda arkeen xidigo si wayn u joojiyay.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar iyo Hazard waxay awood u leeyihiin inay kala dhantaalaan daafac walba oo ka horyimaada laakiin mid kasta oo ka mid ah waxay ka horyimaadeen hal laacib oo neefta ku dhejiyay waayahooda ciyaareed.
Aan ka bilowno xiddiga reer Portugal Cristiano Ronaldo kaasoo sheegay in xiddigii ugu adkaa ee uu abid ka horyimaado uu kula kulmay horyaalka Premier League waana difaacii hore ee kooxda Chelsea Ashley Cole.
“Dagaal badan ayaa la galay Ashley Cole, laakiin kuma siinayo ilbiriqsi aad ku neefsato, marka aad ka horimaaneyso waad iska ogtahay inaysan noqon doonin ciyaar sahlan” ayuu Ronaldo ka yiri Ashley Cole sannadkii 2016.
Xiddig kale oo reer Portugal ah oo isna u arka Ashley Cole inuu ahaa xiddigii ugu adkaa ee uu abid ka horyimid waa Nani.
Xiddiga Paris Saint-Germain Neymar ayaa isna sheegay in xiddigii ugu adkaa ee uu abid ka horyimid inuu ahaa kabtanka Real Madrid Sergio Ramos.
Waxaa isna la mid ah xiddiga Barcelona Luis Suarez oo isna Sergio Ramos ku tilmaamay xiddigii ugu adkaa ee uu abid ka horyimaado.
Antoine Griezmann ayaa bilowgii sannadkii hore waxa uu sheegay in xiddigii ugu adkaa ee uu ka horyimid inuu ahaa xiddigii hore ee Ajax Frenkie de Jong oo ay haatan Barcelona kawada ciyaaraan.
Xiddiga Real Madrid Luka Modric ayaa isna ku tilaamay xiddigii ugu adkaa ee uu abid ka horyimid inuu ahaa kubadsameeyihii hore ee Barcelona Andreas Iniesta.
Xiddiga haatan u ciyaara Real Madrid Eden Hazard ayaa isna tilmaamay in xiddigii ugu adkaa ee uu abid wajaho daafaca Liverpool Virgil van Dijk.
Raheem Sterling ayaa isna sheegay in xiddigii ugu adkaa ee uu ka horyimaado inuu yahay Eden Hazard markii uu joogay Chelsea.
Daafaca da’da yar ee Liverpool Alexandre-Arnold ayaa isna sheegay in xiddigii ugu adkaa ee uu abid ka horyimid inuu yahay xiddiga Barcelona Lionel Messi.
Laakiin waa kuma xiddigii ugu adkaa ee uu Lionel Messi ka horyimid abid? Kabtanka Barcelona ayaa sheegay in xiddigii ugu adkaa ee uu ka horyimid inuu ahaa Pablo Maffeo.
Waa kuma Pablo Maffeo? Waa daafac 22 sanno jir ah oo u dheela kooxda reer Spain ee Girona oo ay iska leedahay Manchester City.